Boeny: vokatra Lojy, mampiakatra ny fari-piainan’ny tantsaha | Région Boeny
Boeny: vokatra Lojy, mampiakatra ny fari-piainan’ny tantsaha
6 juillet 2014 A La Une
Ambohi-pihaonan’ireo mpisehatra rehetra amin’ny lalam-pihariana Lojy sy voamaina, ny kaomina ambanivohitr’Ambondromamy, disitrikan’Ambatoboeny raha nampiantrano ny foara Lojy mitsangana sy voamaina andiany faharoa ny zoma 28 hatramin’ny Alahady 30 jolay.
Raha voalohany manerantany amin’ny vokatra lavanila i Madagasikara, dia faharoa manerantany kosa izy amin’ny vokatra Lojy, ary ny faritra Boeny no mamokatra ny ampahany betsaka amin’izany, hoy ny Tale jeneralin’ny Fambolena, Atoa Ranarivelo Fanomezantsoa, izay nisolo-tena ny Ministra eo anivon’ny Fiadidina ny Repoblika misahana ny Fambolena sy ny Fiompina mpiahy tamin’ny fanokafana ofisialy ny foara.
Sehatra natao hampihaonana ireo mpamokatra sy mpandraharaha ary ireo teknisiana mba hampiroboroana maharitra ny vokatra Lojy sy voamaina eto Boeny no nanaovana ny foara. Ny ministera mpiahy, amin’ny alàlan’ny fandaharan’asa Prosperer Boeny, miaraka amin’ireo mpisehatra rehetra ao amin’y seham-pihariana Lojy no mikarakara azy ity.
« Antsika jiaby miara-miasa hampiakatra ny fari-piainan’ny tantsaha, hampandroso ny toe-karen’ny faritra »
Io no loha-hevitry ny andiany faharoa. Ka raha ny anjara andraikitry ny Faritra Boeny manokana hoy ny lehiben’ny Kabinetra, Atoa Hemedy dia nanomboka ny taona 2015 tamin’ny alàlan’ny famoahany ny lalànam-paritra 039/15/BN/CR mifehy ny seha-pihariana Lojy. Io lalàna io nananganany niaraka tamin’ireo mpisehatra rehetra sy ireo Foibem-paritra voakasika mivantana ny Vovonan’ny seha-pihariana Lojy ny taona 2015, ary nentina namaritra ny Marché contrôlé du Black eyes, tamin’ity taona ity, izay samy efa am-perinasa avokoa.
Mpamboly 100 mahery avy any amin’ireo kaomina 12 ao amin’ny distrikan’Ambatoboeny, ary solo-tena avy ao Marovoay sy Mahajanga II no nandray anjara.
Lojy mena, Lojy mainty maso, Tsororoka, Tsiasisa, Katsaka. Ireo no voamaina tena nibahan-toerana nandritra ny foara. Ary efa nisy sahady ny fitsirihana isaky ny tranohevan’ny tantsaha ny habetsahan’ny vokatr’izy ireo hoan’ny filàn’ny COMESA (Common Market of Eastern and Southern Afirca) araka ny tatitry ny Talen’ny vonjimaikan’ny fampandrosoana ny faritra Boeny, Atoa Randriambololona Marcelin.
Ankoatran’ny tantsaha mpamboly, dia tao koa ireo mpivarotra fanafody famonoana bibikely sy zezika ilaina manokana ho an’ny voly Lojy ary ho an’ny voly hafa. Tao koa ny Fofifa izay nampahafantatra ireo mpamboly ireo masomboly voafantina sy nohatsaraina.
Anisany nahaliana ireo tantsaha ireo fitaovam-pambolena vokarin’ny Foibe fampiofanana sy fampiharana ny fitaovam-pambolena na CFAMA, (Centre de Formation et d’Application du machinisme agricole) ao Ivory, Antsirabe. Nanaovana andrana ny masina famoasana Lojy iray, izay mitentina 8 tapitrisa ariary, ary tsapan’ireo mpamboly fa manampy betsaka azy ireo tokoa izy io.
Tanora mioitra maromaro izay nahazo tohana ara-piofanana avy amin’ny Prosperer ary efa mamokatra zanan-kazo, volotsangana, cocombre, ary manao asa-tanàna, zaitra, fiompina trondro, ary akoho amam-borona: samy nandray anjara tamin’ity foara ity avokoa ary nisy ireo notolorana fitaovana.
Nitombo 50% ny mpandray anjara raha ampitahaina tamin’ny taon-dasa hoy ireo mpikarakara. Notombanan’izy ireo ho toy izay koa ny mpitsidika sy mpanjifa nandritra ireo telo andro. Tsiahivina fa tao amin’ny kaomina ambonivohitr’Ambatoboeny ny foara Lojy mitsangana andiany voalohany ny taona lasa.
Foara: fihaonana sy fifanakalozana
Anisany fitarainan’ny tantsaha nandritra ny fanokafana kosa ny tsy fahampian’ny fahalalan’izy ireo ny amin’ny teknika ara-pambolena sy fiompina. ANkilan’izay nefa, ny mpamboly katsaka ao amin’ny kaomina Ambesisika, distrikan’Ambatoboeny, kosa rehefa nahazo fiofanana ara-teknika tamin’ny Prosperer, dia mampanantena vokatra valo 8t/ha amin’ity taona ity ary efa afaka mampianatra ireo tantsaha namany.
Nandritra ireo loabariandasy nandritra ny telo andro nifanesy, izay fandaharam-potoana nahasarika olona maro koa tao an-toerana, no nivoahan’ireo fifanakalozana ireo. Teo koa ny fampianarana narahina fifanakalozan-kevitra mikasika ny Traçabilité na zotra fihariana ny omby, ny fomba fampiasana ny fanafody famonoana bibikely, zezika simika sy organika, ny fanamorana ny fahazoana masomboly sy fitaovam-famokarana, ary ny fampidramam-bola madinika ho an’ny tantsaha.
Nofaranana tamin’ny fanolorana mari-pankasitrahana ho an’ireo mpandray anjara ny foara Lojy mitsangana sy voamaina andiany faharoa ny Alahady 30 jolay. Ka natolotra ny kaoperativan’ny tantsaha Tamia avy ao Ambatoboeny, tamin’ny an-tsasa-bidiny ilay masina famoasana Lojy, raha ny Prosperer Boeny no mandoa ny antsasany, efatra tapitrisa ariary.